Ifulethi elinombono ohlaba umxhwele e-Ramundberget enhle - I-Airbnb
Ifulethi elinombono ohlaba umxhwele e-Ramundberget enhle
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Torbjörn
Endaweni eseceleni e-Osthang, ingxenye esempumalanga ye-Ramundberget, enombono omangalisayo wentaba nokusondelana okusheshayo nokushushuluza eqhweni, imizila yokushushuluza eqhweni, imizila yokuqwala izintaba neyamabhayisekili kanye nezindawo ezinhle, ilele kuleli fulethi lokuklama elithokomele. Ngemva kosuku uphumile emvelweni, uzulazula uye efasiteleni elikhulu elifudumele futhi ubuke indawo enhle yasezintabeni.
Indawo ekahle yokuphumula ukuze ubumfihlo ngemvelo nomoya ohlanzekile, kude nokubhebhetheka kokutheleleka ngegciwane nezinye izinselele zomphakathi.
Ifulethi lakhiwa ngo-2007 futhi lawina umklomelo omkhulu wokwakhiwa kwezakhiwo. Indlu inezitezi ezimbili ne-loft eyodwa. Iphansi elingenhla linomoya futhi ligqamile ngamafasitela amakhulu ngezinkombandlela ezimbili. Amakamelo okulala kanye ne-sauna esezingeni eliphansi kunamafasitela anezindawo ezinhle zokubuka.
Kukhona indawo yokupaka yangasese enephosti ekhokhisayo yemoto kagesi.
Kunamathuba okuqasha iphakheji yelineni equkethe izembozo zemicamelo, izembozo zeduvethi, amashidi ombhede, amathawula amakhulu namancane. Izindleko zalokhu, kanye nezinto zombhede ngaphambi kokufika zibiza u-SEK 125 kuhlanganise ne-VAT umuntu ngamunye. Sicela wazise umhlaba kusengaphambili ukuthi mangaki amaphakheji owathandayo nokuthi yimaphi amakamelo.
I-Ramundberget ibizwa ngokuthi yi-resort enhle kakhulu yase-Sweden, iphephile kakhulu eqhweni futhi inikeza ukushushuluza eqhweni okuningi ngobude nezwe. Le ndawo iyamangalisa unyaka wonke ngemvelo ethandekayo, ukuthula nokuzola kanye nemisebenzi eminingi kanye nohambo olujabulisayo. Entwasahlobo, ehlobo nasekwindla, ngokwesibonelo ungagibela intaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngesikebhe, ukugibela, ukugibela amahhashi ase-Iceland noma igalofu.
I-Ramundberget ngokuyinhloko ineqhwa lemvelo elenza ukushushuluza eqhweni kube kuhle kakhulu. Indawo engenhla nje kwefulethi ibiqokwe njengenye yezindawo ezinhle kakhulu zase-Sweden ze-piste kanye nokutshuza "i-Prima", okuye kwawina umklomelo njenge-piste enhle kakhulu yase-Sweden, itholakala khona eduze nefulethi. Isistimu yokuphakamisa ivame ukusebenza kuze kube iviki ngemva kwePhasika. Ungathenga izinto zokushushuluza eqhweni esitolo e-Osthangsliften.
Ngokuqondene nesihlalo e-Osthang singamamitha angaba ngu-500 futhi ungaslayida lapho usuka efulethini. Ukusuka lapho ungafinyelela kuwo wonke amanye amathafa nama-lift e-Ramundberget. Uhlala ngezansi nje komzila okude kakhulu e-Osthang, "Svarte Petter" futhi ungaya ngokuqondile efulethini usuka e-Svarte Petter noma ungene uvela ohlangothini uma uvela kunoma yimaphi amanye amathafa futhi ufuna ukugwema ukuya emathafeni athile.
Kunesikhala esiningi kokubili emathafeni nasemizileni yokushushuluza eqhweni e-Kalf Mountain nasemfuleni. Izikhathi eziningi azikho noma imigqa emifushane kakhulu yokuphakamisa. E-Lillramis kunendawo yonke yokudlala evumelana nemidlalo yezingane ezincane kakhulu zasebusika nokuqeqeshwa. Kukhona futhi nomzila omfushane wokushushuluza eqhweni wezingane ezincane kunazo zonke.
I-Ramundberget iyingxenye ye-Nordic Ski e-Funäsfjällen, okungenye yezinhlelo ezinkulu kunazo zonke emhlabeni eziqhubekayo ezinemizila engu-30 yokutshuza eqhweni. Kakade ngo-October kukhona amathrekhi alungiselelwe esigodini lapho kukhona khona i-Ramundberget ne-Bruksvallarna. Phakathi nobusika, amathrekhi engeziwe adonswa entabeni engenalutho nasemigodini, ehlakaniphile futhi eyisicaba, ehlathini eliyi-birch ne-spruce. E-Ramundberget kukhona futhi umkhondo okhanyayo, amakhilomitha angu-2.5.
Kuwo wonke amathrekhi e-Finäsjfällen, udinga inkinobho yokulandelela oyithenga esitolo e-Osthangsliften, indawo yokuthola e-Fjällgården noma ku-Guest Service, enkabeni yedolobhana. Ungathenga futhi inkinobho ehlanganisiwe yokushushuluza eqhweni neyeqhwa. Kukhona nezimpawu ezifakiwe ezinekhodi ye-QR yokukhokha nge-Swish esikhungweni sokulandelela. Inkinobho yokulandelela iphinde inikeze ibhasi lamahhala lokushushuluza eqhweni phakathi kwemizana ukuze ukwazi ukutshuza eqhweni uye e-Bruksvallarna noma e-Tänndalen bese ubuyela ngebhasi.
Kanye nokulandelela entabeni okuqala endaweni ngenhla kwama-lift yindlwana ethokomele ye-waffle Ösjöstugan engafanele iphuthelwe.
Entwasahlobo, ehlobo nasekwindla kunezindlela ezinhle zokuhamba ngezinyawo nezamabhayisikili kokubili phezulu entabeni nasemfuleni nasemanzini lapho. Izintaba ekupheleni komgwaqo e-Ramundberget ziyindawo enhle yokuhamba ngezinyawo. Kukhona izinhlobo ezinhle kakhulu lapha ezinohambo olufushane, uhambo losuku kanye nohambo olude. Izindawo ezivulekile azinamkhawulo futhi kunezinketho eziningi, kokubili izimpungushe ezisanda kulondolozwa futhi ezibaziwe zasezintabeni. Efulethini, kukhona ibalazwe lezintaba elinemizila yasehlobo nasebusika enhle kakhulu.
Eduze kwe-Funäsfjällen kunemizila ebizwa ngokuthi yi-Gold Tours. Ziyatholakala futhi zikhethwe ngokucophelela uhambo lokuqwala izintaba kukho konke ukunambitheka. Lapha uzothola konke kusuka ohambweni olufushane lwamahora ambalwa kuya ohambweni losuku olude lwalabo abafuna ukuzijabulisa. Eziningana zazo zisuka e-Ramundberget.
I-Ramundberget inokuthile kuwo wonke umuntu onesifiso sokuhamba ngebhayisikili futhi iyingxenye yesistimu yomzila we-Funäsfjällen, enamakhilomitha angaphezu kuka-400 emizila yomjikelezo nemizila ongayithola. Kukhona nepaki lamabhayisikili emathafeni angaphezu kwamakhilomitha amane nje we-flowtrail enomshini ofanele kokubili abasafufusa nochwepheshe.
Eduze ne-Ramundberget kunemizila etholakala kalula nemizila yobunzima obuhlukahlukene ukujikeleza nokuthola umhlaba wentaba. Kunemigwaqo nezindlela ezifanelana nakho konke kusuka kumabhayisikili avamile kuya kumabhayisikili asezintabeni. Ukuhambahamba e-Ramundberget kumnandi futhi kuyahlukahluka ngenxa yokushintsha kwezintaba. Kukhona imizila ebanzi enomshini nemizila yokuzivocavoca, ukuvakasha okukhuphukayo nokuyisicaba, izindledlana ezingagciniwe ezinemvelaphi namatshe ayinselele, kanye nomzila wokuzivocavoca ojulile ophakathi kweRamundberget ne-Bruksvallarna.
Ukuze usheshe ufike ekubukeni phezu komugqa wesihlahla, kulula ukuthatha ilifti, i-Fjällgångerbanan, ukhuphuke bese ungena ngqo entabeni. Kungenzeka futhi ukuthi uqale ngokuqondile kusuka ku-Fjällgårdstorget esigodini. Ukuphakamisa ehlobo kugcina i-Ramundberget isebenza phakathi no-July nengxenye ka-August.
Phakathi nezinyanga zasehlobo, indawo ezungeze ifulethi ihlanganisa ukudla kwezilwane ezihlukahlukene, okunikeza umuzwa omuhle owengeziwe we-idyll yasemaphandleni nokusondelana nezilwane nemvelo.
Phakathi nokuhlala kwakho, ungasithinta ngocingo, i-SMS, noma nge-imeyili.